ဓမ်မတာလာတော့မယျ့ အခြိနျကို ကွိုတငျအသိပေးမယျ့ Application (၅)ခု - For her Myanmar
ဓမ်မတာလာမယျ့ရကျကိုမမှတျထားမိပဲ ရောကျရာအရပျမှာ တိုငျမပတျလရေအောငျ…
ယောငျးတို့ရေ… တဈလတဈခါ မိနျးကလေးတိုငျး ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ရာသီစကျဝနျးရကျကို သတိမထားမိလိုကျဘဲ မနေ့တောမြိုးတှေ ကွုံတှဖေူ့းကွတယျဟုတျ။ လစဉျသုံးပစ်စညျးကို အမွဲဆောငျထားတတျရငျ ကိစ်စမရှိပမေဲ့ မဆောငျထားတတျတဲ့သူမြိုးဆို တျောတျောလေးကို အခကျကွုံရတဲ့ အခိုကျအတနျ့ပါပဲ… အရေးကွီးတဲ့ ပှဲလမျးသဘငျတှနေဲ့ အပနျးဖွခေရီးသှားနတေဲ့ အခြိနျမြိုးမှာမြား ဒီရကျနဲ့တိုကျဆိုငျနရေငျ ကသိကအောကျတှေ ဖွဈကုနျပါရော.. ဒီတော့ မငျမငျကနေ ရာသီစကျဝနျးရကျကို မနေ့တေတျတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ ဓမ်မတာလာမယျ့အခြိနျကို ကွိုပွောပွပေးနိုငျမယျ့ အရမျးကိုအသုံးဝငျတဲ့ Application လေးတှကေို ဝမြှေပေးသှားမယျနျော….
(၁) Period Tracker Lite
ဒီ Application ကတော့ ရိုးရှငျးပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ Application လေးပါ။ သူက ရကျတှတှေကျပေးမယျ့အပွငျ ဓမ်မတာလာခြိနျမှာ ခံစားရတာတှကေိုပါ မှတျထားလို့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဗိုကျအောငျ့တာတှေ၊ ဝကျခွံထှကျတာတှေ စတာတှကေိုလညျး မှတျထားလို့ရပါတယျ။
Clue ကတော့ အကောငျးဆုံး ဓမ်မတာသတိပေးတဲ့ Application လေးပါ။ သူက လိငျဆကျဆံသငျ့တဲ့ရကျတှေ၊ ခံစားမှုတှေ၊ ဓမ်မတာလာနှုနျးတှေ စတာတှကေိုပါ မှတျပေးပါတယျ။ ဓမ်မတာလာမယျ့ ရကျကိုကွိုပွီး သတိပေးခကျြ ပို့ပေးတဲ့အပွငျ နောကျကနြရေငျလညျး သတိပေးစာ လှမျးပို့ပေးပါတယျ။
related article >>> “ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာ လူတိုငျးမှာ မဖွဈဘဲ အမြိုးသမီးတှမှောမှ ဖွဈတာမို့ ဒါကို ဂုဏျယူသငျ့တယျ” လို့ ဆိုလာတဲ့ ပနျးကလေးရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ “Henriette Ceyrac”
(၃) Eve Tracker App
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးတှနေဲ့ ဓမ်မတာလာမယျ့ရကျကို စကျဝိုငျးပုံလေးနဲ့ ပွထားပွီး လာမယျ့ရကျကို အလညျမှာ ပွထားပေးပါတယျ။ စိတျခံစားခကျြတှကေို မှတျပေးထားတဲ့ ပုံစံလေးတှကေလညျး ခဈြစရာ အရမျးကောငျးပါတယျ။ အမေးအဖွလေေးတှလေဲရှိတော့ မသိတာတှကေို ဝငျဖတျလို့ရတာပေါ့နျော။
(၄) Flo Period & Ovulation
Flo ရဲ့ထူးခွားခကျြလေးက application ကို lock လုပျထားလို့ရပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှေ၊ လကျကမွငျးတတျသူတှေ ရနျကနေ ကာကှယျလို့ရတာပေါ့နျော။ ရသေောကျတဲ့ အခြိနျတှေ၊ အိပျခြိနျတှေ၊ အလေးခြိနျတှကေိုပါ မှတျထားလို့ရပါတယျ။ ဓမ်မတာလာမယျ့ရကျ တှကျတာလညျး မှနျတဲ့အတှကျ ယောငျးတို့အတှကျ အဆငျပွစေမှောပါနျော။
Related Article >>> ရာသီဥတု အပွောငျးအလဲက ဓမ်မတာ စကျဝနျးပျေါ သကျရောကျမှုရှိလား?
(၅) Period Diary
ဒီ Application လေးကတော့ စိတျခံစားမှု အမြိုး ၂၀ ကြျောတောငျ ရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပနျးပုံစံလေးနဲ့ အလယျမှာ ဓမ်မတာလာမယျ့ရကျကို ဖျောပွထားပေးပါတယျ။ စာတိုလေးတှရေော၊ ဓမ်မတာလာပွီးခဲ့တဲ့ရကျတှကေိုပါ ပွသပေးပါတယျ။
ကဲယောငျးတို့ရေ … တဈလတဈခါ ပုံမှနျတဈပတျလညျလာနကြေ ရာသီစကျဝနျးကို ကွိုသိရတော့ ယောငျးတို့သှားစရာ လာစရာနရေ့ကျတှကေို ကွိုရှောငျလို့ရတာပေါ့နျော.. နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့အတှကျ အကြိုးရှိစမေယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို For Her Myanmar ကနေ တငျဆကျပေးဦးမှာမို့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော….
ဓမ္မတာလာမယ့်ရက်ကိုမမှတ်ထားမိပဲ ရောက်ရာအရပ်မှာ တိုင်မပတ်လေရအောင်…
ယောင်းတို့ရေ… တစ်လတစ်ခါ မိန်းကလေးတိုင်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရာသီစက်ဝန်းရက်ကို သတိမထားမိလိုက်ဘဲ မေ့နေတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ဖူးကြတယ်ဟုတ်။ လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို အမြဲဆောင်ထားတတ်ရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ မဆောင်ထားတတ်တဲ့သူမျိုးဆို တော်တော်လေးကို အခက်ကြုံရတဲ့ အခိုက်အတန့်ပါပဲ… အရေးကြီးတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေနဲ့ အပန်းဖြေခရီးသွားနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာများ ဒီရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေရင် ကသိကအောက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါရော.. ဒီတော့ မင်မင်ကနေ ရာသီစက်ဝန်းရက်ကို မေ့နေတတ်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ဓမ္မတာလာမယ့်အချိန်ကို ကြိုပြောပြပေးနိုင်မယ့် အရမ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့ Application လေးတွေကို ဝေမျှပေးသွားမယ်နော်….
ဒီ Application ကတော့ ရိုးရှင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Application လေးပါ။ သူက ရက်တွေတွက်ပေးမယ့်အပြင် ဓမ္မတာလာချိန်မှာ ခံစားရတာတွေကိုပါ မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုက်အောင့်တာတွေ၊ ဝက်ခြံထွက်တာတွေ စတာတွေကိုလည်း မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။
Clue ကတော့ အကောင်းဆုံး ဓမ္မတာသတိပေးတဲ့ Application လေးပါ။ သူက လိင်ဆက်ဆံသင့်တဲ့ရက်တွေ၊ ခံစားမှုတွေ၊ ဓမ္မတာလာနှုန်းတွေ စတာတွေကိုပါ မှတ်ပေးပါတယ်။ ဓမ္မတာလာမယ့် ရက်ကိုကြိုပြီး သတိပေးချက် ပို့ပေးတဲ့အပြင် နောက်ကျနေရင်လည်း သတိပေးစာ လှမ်းပို့ပေးပါတယ်။
related article >>> “ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ မဖြစ်ဘဲ အမျိုးသမီးတွေမှာမှ ဖြစ်တာမို့ ဒါကို ဂုဏ်ယူသင့်တယ်” လို့ ဆိုလာတဲ့ ပန်းကလေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် “Henriette Ceyrac”
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ ဓမ္မတာလာမယ့်ရက်ကို စက်ဝိုင်းပုံလေးနဲ့ ပြထားပြီး လာမယ့်ရက်ကို အလည်မှာ ပြထားပေးပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မှတ်ပေးထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေကလည်း ချစ်စရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အမေးအဖြေလေးတွေလဲရှိတော့ မသိတာတွေကို ဝင်ဖတ်လို့ရတာပေါ့နော်။
Flo ရဲ့ထူးခြားချက်လေးက application ကို lock လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လက်ကမြင်းတတ်သူတွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်လို့ရတာပေါ့နော်။ ရေသောက်တဲ့ အချိန်တွေ၊ အိပ်ချိန်တွေ၊ အလေးချိန်တွေကိုပါ မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဓမ္မတာလာမယ့်ရက် တွက်တာလည်း မှန်တဲ့အတွက် ယောင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါနော်။
Related Article >>> ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲက ဓမ္မတာ စက်ဝန်းပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလား?
ဒီ Application လေးကတော့ စိတ်ခံစားမှု အမျိုး ၂၀ ကျော်တောင် ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းပုံစံလေးနဲ့ အလယ်မှာ ဓမ္မတာလာမယ့်ရက်ကို ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။ စာတိုလေးတွေရော၊ ဓမ္မတာလာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုပါ ပြသပေးပါတယ်။
ကဲယောင်းတို့ရေ … တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်တစ်ပတ်လည်လာနေကျ ရာသီစက်ဝန်းကို ကြိုသိရတော့ ယောင်းတို့သွားစရာ လာစရာနေ့ရက်တွေကို ကြိုရှောင်လို့ရတာပေါ့နော်.. နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို For Her Myanmar ကနေ တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်….
Tags: Apps, cycle, flow, Health, menstrual, moods, Period, Starting, Tracking